Basikety – “Festival Somaroho 2018”: norombahin’ny ASCB Boeny sy ny MB2 All Analamanga | NewsMada
Basikety – “Festival Somaroho 2018”: norombahin’ny ASCB Boeny sy ny MB2 All Analamanga
Nifarana, tany Nosy-Be, ny fiadiana ny “Festival Somaroho 2018”, taranja basikety. Mbola voatazon’ny ASCB Boeny ny anaram-boninahitra teo amin’ny lehilahy. Lasan’ny ekipan’ny MB2 All Analamanga kosa ny an’ny vehivavy.
Norombahin’ny ASCB Boeny, teo amin’ny lehilahy, sy ny MB2 All Analamanga, ho an’ny vehivavy, ny andiany fahadimy amin’ny “Festival Somaroho 2018”, taranja basikety, sokajy N1A. Fihaonana, nifarana ny asabotsy lasa teo, tany Nosy-Be. Resin’ny ASCB, teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa 76 no ho 73, ny GNBC Vakinankaratra.
Niady ny lalaon’ny roa tonta satria ekipa efa diso mifankahalala tsara ny nihaona. Nitarika teo amin’ireo 10 mn roa voalohany ny ekipan’ny Zandary, izay nisaraka tamin’ny isa, 60 no ho 54, teo am-pialan-tsasatra. Tsy kivy fa nanenjika hatrany ry zareo Boeny, teo amin’ireo ampaham-potoana roa farany nilalaovana. Nosahalain’izy ireo, 66 no ho 66, ny isa teny amin’ny solaitrabe, teo amin’ny 4 mn tsy hifaranan’ny fotoana.
Nanao fitarainana matetika, taorian’io, ny Zandary izay nilaza fa misy fitsarana tsy ara-drariny nataon’ireo mpitsara ny lalao. Nisy, araka izany, ny fiatoan’ny lalao, saingy nitohy ihany izany, rehefa nisy ny fifampiresahana teo amin’ny telo tonta: ny mpitsara sy ny mpilalao roa tonta.
Niseho anefa ny fahaiza-manaon’i Livio, mpilalaon’ny ASCB, taorian’izay, tamin’ny alalan’ny fanaovana tifitra isa telo. Tetsy ankilany, tratry ny fahamehana sy fikoropahana ny Zandary ka betsaka ireo baolina narian’izy ireo. Tsy mbola niala teo am-pelatanan’ny ASCB Boeny izany ny amboara eo amin’ity “Festival Somaroho” ity.
Teo amin’ny vehivavy, lavon’ny MB2 All, tamin’ny isa 57 no ho 43, ny Ascut Atsinanana. Ny BBCM Analamanga kosa no tompondaka teo amin’ny “veteran” lehilahy rehefa nandavo ny ekipa voafantin’i Nosy-Be, tamin’ny isa 50 no ho 40.
Voahosotra ho mpilalao mendrika i Livio. Nahatafiditra ny baolina be indrindra kosa i Faralahy. Izy mirahalahy izay samy mpilalaon’ny ASCB Boeny avokoa.